ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 3/1/09 - 4/1/09
လက်ပန်ကျင်းရွာ ဆိုတာ ကျနော့် မွေးရပ်မြေ ရွာလေးပေါ့။
တောင်မှ မြောက် တန်းစီနေတဲ့ တောင်ရွာ+အလယ်ရွာ+ညောင်ရွာ+သီးကုန်းရွာ ဆိုတဲ့ရွာ လေးရွာကို ပေါင်းပြီး လက်ပန်ကျင်းရွာ လို့ခေါ် ပါတယ်။
လူငယ်အားမာန်အဖွဲ့ ဆိုတာကတော့ လက်ပန်ကျင်းရွာမှ နယ်မြေ
ဒေသ အသီးသီး (ပြည်တွင်း ပြည်ပ) ရောက် လူငယ် လေးများ ပေါင်းစည်းမှု အဖွဲ့လေး တစ်ဖွဲ့ဖြစ် ပါတယ်။
လူငယ်အားမာန်အဖွဲ့ ဘာတွေ လုပ်မလဲ - လက်ပန်ကျင်းရွာ အခြေခံပညာ အလယ်တန်း ကျောင်းမှ အနာဂတ်၏ သားကောင်းရတနာ ညီငယ် ညီမငယ်များ အတွက် အထွေထွေ ဗဟုသုတ ရစိမ့်သော ငှာ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် ၊ တတင်းစာများ၊ အင်္ဂလိပ် အက်ဆေး စာအုပ်များ၊ မြန်မာစာ စာစီစာကုံး စာအုပ် များ စသည် စသည် များကို လစဉ် လှူဒါန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူး ယဉ်တာ ကတော့ - ကျနော် မောင်ဆန်းဝင်း နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ပုဆိုး လယ်သိုင်း သူငယ်ချင်း ကိုစိုးငြိမ်းအောင် ပေါ့ ခင်ဗျာ။ လက်တွေ့ အကောင်ထည် ဖေါ်ဖို့ကိုတော့ ကိုစိုးငြိမ်းအောင် ကပဲ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘေးပြော .. ဟိုလိုလုပ်ပါလား ဒီလိုလုပ်ပါလား .. ဒါတော့ ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ်.. အဲလိုပဲပေါ့ခင်ဗျာ..
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုရင် - စာအုပ်များ လှူဒါန်းမှု အတွက် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမောင်ဝင်း နှင့် တိုင်ပင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက် တွင် ထာဝရတည် စေရေး - အထက်တွင် မြင်ရသော လူငယ်အား မာန်အဖွဲ့ အမည်ပါ တံဆိပ်တုံး နှိပ်ကာ လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်လား - ခုလောလောဆယ် ၂၀ ဦးခန့် ရှိပါတယ်။ လှူဒါန်းမှုကိုတော့ ငွေကြေးပမာန သတ်မှတ် ထားခြင်း မရှိပါဘူး ခင်ဗျာ။ လစဉ် လစဉ် ပုံမှန် လှူဒါန်း ဖို့ပဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။
လှူဒါန်းမှု ကို - ယခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီ မှ စတင်ကာ လစဉ် လှူဒါန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
DatE Tuesday, March 31, 2009 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
အမေ့ ယက်ကန်းစင် (၁)
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်သည် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် သောက်သုံးရေ အရှားပါးဆုံး မြို့ တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မိုးနည်း ရေရှား ရပ်ဝန်းကို ပြပါဆိုလျှင် ကျောက်ပန်း တောင်း မြို့သည် ရှေ့ဆုံးက ပါမည် ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်နှင့် ဝေးကွာပြီး သစ်ပင် ၀ါးပင် နည်းပါး မှုကြောင့် မိုးရာသီတွင် မိုးနည်း သည်။ နွေအခါတွင် ချစ်ချစ်တောက် ပူသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် အအေးလွန်ကဲသည်။ ဤကား အညာသရုပ် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကျနော့် ဇာတိမြေ လက်ပန်ကျင်းရွာလေး၏ အရှေ့ဖက်တွင် ကန္တာရ အိုအေစစ် တစ်ခု သဖွယ် ဖြစ်သော တောင်စဉ်ချောင်း တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်း တောင်စဉ်ချောင်း သည်နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီ ရေအမြေဲ မပြတ် စီးဆင်း သည်။ ပုပါးတောင်၏ စိမ်းမြဆိုပြေမှု အကျိုးဆက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ တောင်စဉ်ချောင်းအား အမှိပြုကာ ကိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နိုင်သည်။ ကြက်သွန် ဖြူ နီ၊ ခရမ်းချဉ်၊ မုန်လာ၊ မေမြို့ပန်၊ ဂန္ဒမာပန်းများ ချဉ်ပေါင်၊ ဗူး၊ သခွား၊ ဖရဲ စသည် စိုက်ပျိုး နိုင်ကြသည်။
ယခု အချိန်သည် အညာဒေသ၏ အပူပြင်း ဆုံးအချိန် ဖြစ်သည်။ နွေနေ ပူပူကို အန်တုလျှက် လက်ပန်ပွင့်များ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် ပွင့်သော ကာလဖြစ်သည်။
“လာဟေ့ဒွား သွားကောက် ချေစို့ ပွင်ခြောက်ကယ် အနားလန် ပင်လက်ပန်ကျွေချိန်ကျပြီမို့”
ဆိုတဲ့ကဗျာလေး ကိုပင် သတိရမိသည်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် လက်ပန်ပွင့်ကောက်ဖူးသည်။ နွေအခါသည် အညာဒေသ တောင်သူများ အတွက် အနားယူသော ကာလ လည်း ဖြစ်သည်။ မိုးဦးကျတွင် အဆင်သင့် စိုက် ပျိုးနိုင်ရေး မျိုးစေ့များ သန့်စင်ခြင်း၊ လယ်ယာမြေများ ထွန်ရေးခံကာ အဆင်သင့်ထားရှိခြင်း အလုပ်သာရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် အလုပ်ပါး၍ အနား ရသော ကာလ ဖြစ်သည်။ လူငယ် လူရွယ်များ အဖို့ လည်း ကျောင်းအား ရက်ဖြစ်သည်။ လေးခွ ကိုယ်စီနှင့် ချောင်ရိုးတလျှောက်ရှိ လက်ပန်ပင်တန်းတွင် (ရှဉ့်ဖမ်းခြင်း) တောလိုက် ကြသည်။
ကျနော် ငယ်စဉ်က အလွန် ခြေဆော့ လက်ဆော့ ရှိသည်။ ကျနော့် ထက် ကျနော်၏ညီက ပို၌ ခြေဆော့ လက်ဆော့ရှိသည်။ တခါက သူသည် ရေအိုးရွက်လာသော မိန်းမပျို အား ခါးကို တို့ကာ၊ နှိုက်ကာ ကျီစယ်၏ အဆိုပါ မိန်းမပျိုမှာ ရယ်ခြင်စိတ်ကို မထိမ်းနိုင်ပဲ ရေအိုးကို လွတ်ချ လိုက်ရသည်။ ကျနော့်၏ မိဘများအား တိုင်တန်း ရာ ညီတော်မောင်ခမျာ အရိုက်ခံရသည်။
ကျနော်သည် ညီတော်မောင်နှင့်မတူ။ လက်ဆော့ခြင်းတော့ လက်ဆော့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတန်း အရွယ်ကဖြစ်သည်။ မိဘများ မသိအောင် အိမ်ရှိတိုင်ကပ်နာရီ ကြီးအား ဖွင့်ကာ ဟိုနှိုက် သည်နှိုက် လုပ်၍ စူးစမ်းသည်။ ပြန်ပိတ်သောအခါ စကူ တစ်ခု ပိုနေလေသည်။ သို့သော် နာရီကြီးမှာ စက်သွားနေသေး၍ ကံကောင်း သွားသည်။ ငါးတန်းအရောက်တွင် အကိုကြီးမှ ညီငယ်များအတွက် စာကျက်ထရန် (ကလင် ကလင်မြည်သော) အချက်ပေး နာရီ ၀ယ်ပေးသည်။ အဖေမှ တားမြစ်ထား၍ ဖွင့်ကြည့်ခြင်သော စိတ်အား မနည်းထိမ်း ထားရသည်။
အမေသည် ယက်ကန်းယက် ခြင်းအာ တစ်ဖက်ကမ်းခပ် ကျွမ်းကျင်သည်။ အမေ့ ယက်ကန်းစင် သည် လေးတိုင်ထောင် တစ်လွန်းထိုး ဖြစ်သည်။ အမည်နာမများအာ သိပ်မှတ်မိတော့ချေ။ တိုင်လေးတိုင်နှင့် ယက်ကန်းစင်တွင် လက်ခတ်၊ နှပ်၊ ခြေနင်း၊ လွန်း၊ စသည်ဖြင့်ရှိသည်။ ကျနော် ငယ်စဉ်က ယက်ကန်းနှင့် ပတ်သက် သောအရာ တော်တော်များများအား လုပ်တတ် သည်။ ဗိုင်းငင်တတ်သည်။ ချည်ချတတ်သည်။
ရုံဖန်ရံခါ ယက်ကန်းစင်ပင် ၀င်ကာ လက်ခတ်လိုက်သေးသည်။
သို့သော် တညင်းလုံးခေါ် ရစ်ဘီးမှ ဘီးနှစ်ခုအား (ပိတောက် (သို) နို့စည်ဗူး ဖင်ခေါက် ”တောက် တောက် တောက်” ) လုပ်ရုန် ဖြုတ်ယူခဲ့၍ အမေ့ အရိုက်ခံ ရသည်။
ယက်ကန်း ယက်ရန် ၀ါဂွမ်းကို မိမိယာတောထွက် ၀ါဂွမ်းဖြင့် လည်းလုပ်သည်။ အဆင်သင့် ဗိုင်းတောင့်များ ၀ယ် ယူ၍လည်း ပြုလုပ်သည်။ ၀ါဂွမ်းမှ အ၀တ် တစ်ထည်ဖြစ်လာပုံကား မလွယ်ကူ ပေ။ အဆင့်များစွာ ကျော်ဖြတ် ရသည်။ အမေ ယက်ကန်းစင်မှ လုံချည် (ကွက်စိပ် ၊ ကွက်ကျဲ၊ ချိတ်၊ ပန်းပွင့်ပုံဖေါ်) များ၊ အကျီ (ည၀တ်လက်ရှည်၊ ပင်နီတိုက်ပုံ)စသည်၊ စောင်များ ၊ တဘက်စောင်များ ယက်လုပ်သည်။
အမေသည် ယက်ကန်း မယက်နိုင်သည်မှာ ကြာချေပြီ ။ ယခုမူ အမေ့အမွေ ဆက်ခံမည့်သူ မရှိပေ။
DatE Monday, March 30, 2009 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
ပန်း ရဲ့ ချစ်သူ
ပန်း ရဲ့ စိတ်ဝိညဉ်
ချစ်သူ့ ရနံ အနားမှာရှိနေတာ
ရေးသူ = မြန်မာမလေး ပန်းပိတောက်
DatE Saturday, March 28, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
စိတ်ခြင်းထပ် နှလုံးသွေးခြင်း ဆက်လို့
သားအတွက် အင်အားတွေပါ အမေ။
DatE Thursday, March 26, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ကိုယ်ရယ် မင်းရယ် ပိတောက်ရယ်။ မင်းရယ် ကိုယ်ရယ် ပိတောက်ရယ်။ ပိတောက်ရယ် မင်းရယ် ကိုယ်ရယ်လေ။ ဒီအဖြစ်ပျက်တွေ။ ကိုယ်လည်း သိတယ်။ ပိတောက်လည်းသိတယ်။ မင်းကိုယ်တိုင်လည်း အသိပါကွယ်။
DatE Tuesday, March 24, 2009 LaveL PhoTooooooO0comments link this
Written by ချိုစု
Tuesday, 30 September 2008 16:34
အခုအခါ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းသားလေးတွေ နိုင်ငံခြားကို ကျောင်းလျှောက်တာ အရင်ကထက် များပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို ကျောင်းလျှောက်ချင်တယ် ဆိုရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကို သိရအောင် စကားဝိုင်းလေး တစ်ခု စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီစကားဝိုင်းလေး ဖြစ်မြောက်အောင် ဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း)၊ ဆရာ ဦးသစ္စာ (Student Services Manager) (သူရိန်ငယ်)၊ အောင်ကျော်ထွန်း (AKT), အေးမြတ်မြတ်သင်း (Jasmine), မေသူသူနွယ်(မေသူ)၊ သူရကျော်တို့ က ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။
AKT ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စနစ်နဲ့ အမေရိကန်စနစ် ဘာကွာသလဲ ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။
သူရိန်ငယ်။ ။ ဘာကွာသလဲဆိုရင် တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ဖြေရတာမှာ ကွာတာပေါ့။ တက္ကသိုလ် ၀င်မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စနစ်သုံးတဲ့ ကျောင်းတွေ ဆိုလို့ရှိရင် GCE တောင်းတယ်။ ဟိုဘက်မှာကျ တော့ SAT(Scholastic Aptitude Test) တောင်း တာပေါ့။ သို့သော် မာစတာရောက်သွားရင် သိပ် မကွာတော့ဘူး။ မာစတာရောက်ရင်တော့ ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးသိပ္ပံဆိုရင် GRE (Graduate Record Examination) ဖြေရမယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် GMAT (Graduate Management Admission Test) ဖြေရမယ်။ အမှန် GRE, GMAT အမေရိကန် စနစ်ပဲ။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေကိုယ် နှိုက်ကလည်း ဒါကို လက်ခံကျင့်သုံးတယ်။
ဥပမာ၊ အင်္ဂလန်မှာ ဘွဲ့လွန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် First Degree က Related Degree ဖြစ်ရင် ပို ကောင်း တာပေါ့။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘွဲ့ လွန်တက်မယ်ဆိုရင် First Degree က အီကိုဖြစ် ရင်ကောင်းတာပေါ့။ အီကို Directly မဟုတ်ရင် တောင်မှ အီကိုပါတဲ့ ဘာသာရပ်မျိုးဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲဒီမှာမှ ကြားထဲမှာ ခင်ဗျားဟာခင်ဗျား IELTS (International English Language Testing System) ပဲဖြေဖြေ TOEFL (Test of English asaForeign Language) ပဲဖြေဖြေ၊ Postgraduate က နည်းနည်းလေး Free ပိုဖြစ်သွား တာပေါ့။နောက် Credit ပေးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် First Degree (Under-graduate) ဆိုလို့ရှိရင် တချို့ဟာတွေက Semester တစ်ခုကို ၃ ဘာသာနဲ့ လက်တွေ့တစ်ခု လုပ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၄ ဘာသာ အပြည့်ယူခိုင်း တာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီဟာကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် အင်္ဂလိပ် စနစ်၊ အမေရိကန် စနစ်ရယ် မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကျောင်းက သူ့ Course Design ကို ဘယ်လိုချထားသလဲဆိုတာမှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ တချို့က သီအိုရီ အရမ်းအားသန်တဲ့ကျောင်းမျိုး၊ သီအိုရီ အရမ်းတွန်း သင်တာပေါ့။ လက်တွေ့ နည်းနည်းအားသန်တဲ့ကျောင်းဆို လက်တွေ့(Practical Work) တွေပါ လုပ်ရတယ်။ သီအိုရီအားသန်တဲ့ကျောင်းဆို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို Paper အနေနဲ့ ချပေးလိုက်တယ်။ Semester တစ်ခုလုံး စာဖတ်ပြီးရေး၊ ဒီဘက်က တက်တာလည်း တက်နေရတာပေါ့။ ဒါကို Credit တစ်ခုပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခု အနေနဲ့ ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းတာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ တော်တော်လေး Busy ဖြစ်တယ်။SAT ဖြေဖြေ GCE ဖြေဖြေ ၀င်သွားတယ်၊ တက်ပြီဆိုရင် ဆေးကျောင်း တက်တယ် ဆိုရင် သင်တဲ့ Main Course တွေက ဒီ Frame တွေပဲ။ ဥပမာ ထားပါတော့ ဒီက ဆေးကျောင်းတက် နေတဲ့လူက ပိုသိမှာပေါ့။ အမေရိကန်က ဆေးကောလိပ်မှာ သင်တဲ့ဟာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဆေးကျောင်း First MB, Second MB သင်တဲ့ဟာနဲ့ နည်းနည်းလေး ကွာချင်ကွာလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ဒီဟာတွေပဲသင်ရမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ Physiology သင်ရ မယ်။ Human Biology သင်ရမယ်။ နောက်ပိုင်း ကြာလေကြာလေမှာ Focus နည်းနည်းလေး။
ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ဆို Tropical Disease တွေပေါ တဲ့တိုင်းပြည်။ သင်တဲ့နောက်ပိုင်းတွေ Tropical Disease တွေနဲ့ပတ်သက် ပြီး ပိုပြီးတော့ပါမယ်။ ဟိုမှာကျတော့Tropical Disease က မရှိသလောက် ဆိုတော့၊ တခြားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တာတို့၊ သူတို့ဆီမှာ နည်းနည်း Hot ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ သင်ရမယ်။ နောက် US မှာ ရှိတဲ့ ဆေးကျောင်းတွေက အစိုးရကျောင်းတွေ မဟုတ်ဘူး။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တစ်ခုချင်းစီရဲ့ သူ့အားသာချက်အလိုက် ရှိတာပေါ့။ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေ စိတ်ဝင်စားကြလဲ။
AKT။ ။ ကျွန်တော်က Bio ဘက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ Paramedical (ဆေးဘက်ပညာ) တို့ဘာတို့ပေါ့။ ပြီးတော့မှ ဆေးကျောင်း တက်ဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်။ အခု Bio နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေ ဒီမှာတက်နေတယ်။ ကျောင်းရောက်လို့ရှိရင် မစိမ်းအောင်ပေါ့နော်။ ရင်းနှီးအောင် လုပ်ထားတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားတယ်ပေါ့။သူရ။ ။ ကျွန်တော်က Dental (သွားဘက် ဆိုင်ရာ) စိတ်ဝင်စားတယ်။ Dental ကကျတော့Dental မတက်ခင် Biochemistry က ၂ နှစ် တက်ရတယ်။ နောက် Dental တက်၊ Dental ပြီးသွားတော့မှ မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာ သွားတွေ ပြန်ပြင်တဲ့။ Plastic Surgery နဲ့ တော်တော်လေး နီးစပ်တယ်။ Maxillofacial ဆိုတာ ၄ နှစ် တက် ရတယ်။ ဆိုတော့ Biochemistry ၂ နှစ် Dental ၄ နှစ်၊ Maxillofacial ၄ နှစ် စုစုပေါင်း ၁၀ နှစ်။Jasmine ။ ။ Biomedical ကနေ ဆရာဝန်လိုင်း ပြန်ကူးဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။
မေသူ။ ။ အတိအကျတော့ မရှိသေးဘူး။ လော လောဆယ် Business ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ အခု LCCI တက်နေတယ်။
ဦးသူရိန်ငယ်။ ။ အဲဒီတော့ ကျောင်းလျှောက် တဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားတစ် ယောက်အနေနဲ့၊ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသား လူငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာအခက်အခဲ အရမ်းဖြစ် လဲ။
AKT ။ ။ အခက်အခဲက SATဖြေတာပဲ။ SAT က English တော်တော်လုပ်လိုက်ရတယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ ကိုယ် အားထုတ်ရမယ့်ဟာ ပေါ့နော်။ ဥပမာ ထားပါတော့TOEFL ဆိုရင် အားလုံး ၆၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရအောင် လုပ်တယ်။ ဒီဘက်က SAT ဆိုရင်လည်း Average လောက် ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အား စိုက်ထုတ်နိုင်တယ်၊ Control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းပေါ့။ ကိုယ် အားစိုက်ထုတ်လို့ လုံးဝမရတဲ့ ကျောင်းရွေးတာ က စပြီးတော့ပေါ့နော်။ Ranking တွေ ကြည့် တာတို့၊ သူတို့က ကိုယ့်ကို မရွေးဘူး ရွေးတယ် ဆိုတာကျတော့ ဒီအပိုင်းက နည်းနည်းလေး ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ပိုကောင်းတယ်။ အဲတော့ ကျောင်းကို ဘယ်လိုရွေးလဲ။
AKT။ ။ ကျောင်းက အဓိကက မေဂျာနဲ့ပဲဆိုင် တာပေါ့။ ကိုယ်ယူမယ့် မေဂျာ လူကြိုက်များ မများ ပေါ့နော်။
မေသူ။ ။ International Student (နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား)ကို Financial Aid (ငွေကြေး အထောက်အပံ့)ပေး၊ မပေးကို ကြည့်တယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ အဲလိုရွေးတဲ့အခါမှာ ကျောင်း နာမည်ကြီးတာတွေ Focus လုပ်သေးလား။ ဥပမာ ဆေးကျောင်းတက်မယ့်လူဆို ဘယ် ကျောင်းတွေ ဘယ်ကျောင်းတွေ၊ သွားနဲ့ပတ် သက်တဲ့ Dental Technician ဆို ဘယ်ကျောင်း ဘယ်ကျောင်း၊ Business ဆိုရင် ဘယ်ကျောင်း ဘယ်ကျောင်း၊ အဲလိုရွေးတာမျိုး ရှိလား။Jasmine ။ ။ Ranking တွေကြည့်ပြီးတော့ ရွေးတာ။
သူရိန်ငယ်။ ။ကျောင်းလျှောက်ရတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလား။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောသလို ဗုံးကြဲ လိုက်တာပေါ့။ ၁၅ ကျောင်းဆိုပြီးလျှောက်၊ အဲဒီကနေ ၅ ကျောင်း ပြန်တက်လာလည်း မနည်းဘူးဆိုပြီး၊ အဲလိုလျှောက်လား။ ကျွန်တော် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်က Postgraduate ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် တကယ်ခက်တဲ့ဟာက Essay ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Postgraduate မှာ Working Experience (လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ) ရယ်၊ အက်ဆေးရယ် ၂ ခုက အလေးအပေးဆုံး ဆိုတော့ အလေး ပေးတဲ့ဟာကို ကိုယ်က အလေး ထားနိုင်မှရမယ်။ မဟုတ်ရင် မရဘူး။ အဲဒီအခါ ကျတော့ ၂၀ လျှောက်တယ်။ ၁၅ ကျောင်း လျှောက်တယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀ ဂဏန်းနဲ့ အထက်ပေါ့နော်။ ၁၀ ကျောင်းကနေ ကျောင်း ၂၀ လောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာ တချို့လည်း ရတယ်။ တချို့လည်း မရသေး ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ မရဘူးထင်လဲ။ ကိုယ် ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ထင်လဲ။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းလျှောက်တဲ့လူအနေနဲ့။
AKT ။ ။ အဓိက ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ အက်ဆေးပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တယ်။
သူရ။ ။ မရကြတာ အက်ဆေးကောင်းကောင်း မရေးနိုင်လို့၊ ပြီးတော့ Extra Curriculumာ က သူတို့တောင်းတဲ့ဟာ Standford တို့ ဘာတို့ဆို ၆ ခုတို့ ဘာတို့ တောင်းတယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ အဲဒါဆိုရင် အက်ဆေးအကြောင်း နည်းနည်းပြောရအောင်။ အက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတွေ ရေးဖူးတယ်။ Application Process မှာ အက်ဆေးရေးတာကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ခက်လား လွယ်လား။မေသူ။ ။ ခက်တယ်လို့ ထင်တယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ Personal အက်ဆေးရေးရတယ်၊ နောက် ဘာရေးရသေးလဲ။
မေသူ။ ။ ပြီးတော့ ကျောင်းတစ်ခုချင်းစီက သူတို့ ထပ်မေးထားတဲ့ မေးခွန်း တိုလေးတွေ၊ သူတို့ကျောင်းကို ဘာလို့စိတ်ဝင်စားသလဲ၊ အဲလိုမျိုးတွေ။
သူရိန်ငယ် ။ ။ ကျောင်းတွေမှာ များသောအားဖြင့် မေးလေ့ရှိတာ"Your achievement" - within 200 words. "The most significant achievement." အဲဒါမျိုးတွေကျတော့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲ။Jasmine ။ ။ အဓိကကတော့ပေါ့နော်။ Personal အက်ဆေးက ကိုယ့်ရဲ့ Personalငအပ ကို ဖော်ပြတဲ့နေရာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Background တစ်ခုကနေ ဆွဲထုတ် ပြီးတော့ Idea ကို ပြန်ပြီးဖော်ပြရတာပေါ့။
AKT ။ ။ ကျွန်တော့်တုန်းက ကျွန်တော် ရေးလိုက်တာက ဒီကျောင်းကို ဘာလို့ရွေးတာလဲ၊ နောက်တစ်ခါကျတော့ ကျောင်း Website တွေ၊ ကျောင်း စာအုပ်တွေထဲက ဒီကျောင်းရဲ့ ကောင်းကြောင်းတွေ အဲဒါတွေကို ရှာပြီးတော့ ပေါင်းပြီး ကြိုးစားပြီး ရေးလိုက်တာပေါ့။
သူရ ။ ။ ကျွန်တော်ကျတော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အက်ဆေးကို ပထမဦးဆုံး အစပျိုးလိုက်တယ်။ နောက် ဘယ်အချက်တွေထည့်မလဲFactsတွေ လိုက်စု ပြီးတော့ ရေးတယ်၊ ရေးပြီးတော့ မကောင်းတာရှိရင် ပြန်ပြန်ပြကြည့်တယ်။ အစ်ကိုကို ပြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြတယ်။
AKT ။ ။ သူငယ်ချင်းတွေကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြန်စစ်ခိုင်း လို့ရတာပေါ့။
သူရိန်ငယ် ။ ။ အဲဒါတွေ ဘယ်နှရက်လောက်ကြာလဲ။မေသူ။ ။ အချိန်များများပေးနိုင်လေ ပိုပြီးတော့ကောင်းလေပေါ့။ ပြန်ပြန် ပြင်လို့ရတာပေါ့။
သူရိန်ငယ် ။ ။ အားလုံး တစ်ယောက်ယောက်ဆီက အကူအညီ နည်းနည်း တော့ ယူကြတာပေါ့နော်။ အဲဒါကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့် ဆရာတစ်ယောက် ပြောဖူးတယ်။ သူ ပြောတာက အက်ဆေးကို သူတို့က သိပ်အလေးထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကသာ အက်ဆေးကို ကျောင်းမှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်သလို လျှောက်ရေးတာ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ သိပ်လည်း အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်တယ် နော်။ စာမေးပွဲဆိုလို့ရှိရင် မြန်မာအက်ဆေးဆိုရင်တောင် အမှတ် ၂၀ ပေး တာဆိုရင် နည်းတဲ့အမှတ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို တော်ရိလျော်ရိပဲ ဖြေတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ဖြေတောင်မဖြေဘူး။ ကိုယ်က ဟိုဘက်က အမှတ် ၈၀ လုံး အပြည့်ရမယ်လိုလို ဘာလိုလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က အက်ဆေး ကို သိပ်မယဉ်ပါးဘူး။ မယဉ်ပါးတာ ကျွန်တော်တို့က ရေးနေမကျလို့။ ရေးရတဲ့အလုပ်က သီးသန့်ကြီးကို ဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော်တို့က အက်ဆေးနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားသလိုပဲ။ သို့သော် ကျွန်တော့်ဆရာ ပြောတာကကျတော့ သူတို့ က အက်ဆေးကို သိပ်အလေးထားတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို မရွေးဘူးရွေးတယ် ဒီအက်ဆေးနဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်တယ်။ သူက အဓိကပဲ။ တခြား လိုအပ်တာတွေတော့ ရှိတာပေါ့နော်။
ဥပမာTOEFLပါရမယ်၊ ဘာပါရမယ်၊ ညာပါရမယ်၊ အဲဒီဟာတွေအားလုံး ဖြစ်တော့မှ အက်ဆေးကို စဖတ် တာကိုး။ အဲဒါမပါဘူးဆိုရင် ဖတ်တဲ့အဆင့် မရောက်တော့ဘူး။ အဲတော့ အဲဒါတွေ အကုန်ပါရင် အက်ဆေးကို စဖတ်တယ်။ ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး တစ်ပိုဒ်ပဲ ဖတ်တယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပထမဦးဆုံး စာပိုဒ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူး ယူဆရင် ကျန်တာကို ဖတ်ချင်ဖတ်မယ်၊ မဖတ်ချင် မဖတ်တော့ဘူး။ ကျောင်းဘုတ်တစ်ခုမှာ ခင်ဗျားတို့လိုပဲ လျှောက် တဲ့လူက အများကြီး။ ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီပြီး ဖတ်ရတဲ့အခါမှာ၊ နံပါတ် တစ် အပေါ်ဆုံးတစ်ပိုဒ်ဖတ်လိုက်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာ သိပ်မကောင်းဘူး ဆိုရင် သူက အဲဒီမှာ လျော့သွားရော။ တခြားဟာတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ တချို့ကျောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင် သူက Program လုပ်ထား တာပေါ့။ ဥပမာTOEFL ဆိုဘယ်လောက်၊ သူက Generalise လုပ်ချလိုက်တယ်။ ထားပါ တော့၊ အယောက် ၂၀၀ ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်TOEFL တို့ SAT တို့ အဲဒါ တွေနဲ့ စီလိုက်လို့ရှိရင် ၄၀၀ လောက်ရှိမယ် ၅၀၀ လောက်ရှိမယ်။ အဲဒီ ၄၀၀ ၅၀၀ ထဲမှာမှ တောက်လျှောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်တာပေါ့။ ကျွန်တော် လည်း ဟိုရေး ဒီရေးနဲ့ တောင်ရေးမြောက်ရေးနဲ့ လျှောက်ရေးပြီး ကျောင်း ရောက်သွားပြီးတော့မှ အက်ဆေးကတော့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိတာ။ အဲတော့ တစ်ခု ကျွန်တော် မေးဦးမယ်။ အက်ဆေးကော ဖတ်လား။
သူရ။ ။ သူများရေးတဲ့ အက်ဆေးတွေတော့ ဖတ်တယ်။
AKT ။ ။ ဖတ်တယ်ဗျ။ အဓိကက လေ့ကျင့်ဖို့ လုပ်ဖို့လည်း လိုတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ မလေ့ကျင့်ရင်၊ မလုပ်ရင် မဖြစ်ဘူး။
သူရိန်ငယ် ။ ။ လေ့ကျင့်တဲ့တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ Coaching လို့ပဲ ပြောရအောင်။ ရေးတယ်ပြတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက် များသော အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆီက အင်္ဂလိပ်ဆရာတွေက ရေးတဲ့ Grammar ကို စစ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့ Idea ကို သိပ်မပြောနိုင်ကြဘူး။ Language ဆရာက Language အနေနဲ့ပဲ ပြောတယ်။ ဒီ Sentence ကို ဟိုလို ရေးရမယ် ဒီလိုမရေးရဘူး။ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်လုံးအနေနဲ့ Theme ကတော့ သိပ်မရှင်းဘူး ဒီနေရာလေးမှာဆို ဒီလိုအချက်တွေက အထောက်အကူ ဖြစ် တယ်။ ဒီအချက်ကတော့ အထောက်အကူမဖြစ်ဘူး စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ အဲလိုပြောပေးနိုင်တဲ့လူ သိပ်မရှိဘူး ထင်တယ်။
AKT ။ ။ SAT အက်ဆေးဆိုရင် အဲလိုပဲပေါ့နော်။ွမောာမေ တွေ သိပ်မကြည့်ဘူး။ သူကIdea အဓိကပဲ။
သူရိန်ငယ်။ ။ ကျွန်တော် အဓိကမြင်တာတော့ ဒီအခုနက အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံရတာပေါ့။ ဥပမာ SAT ဖြေရတယ်။ ကျောင်းတွေ အများ ကြီး ရှာရတယ်။ တစ်ခါ TOEFL ဖြေရတယ်။ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အချိန် မှာ အဓိကက အက်ဆေး ဖြစ်သွားတယ်။ အက်ဆေး ဘယ်လောက် အရေး ကြီးလဲဆိုတာကတော့ အခုနက ကျွန်တော့်ဆရာပြောသလိုပဲ အက်ဆေး တစ်ပိုဒ်ပဲ ဖတ်ကြည့်တယ်။ ထိပ်ဆုံးအပိုဒ် မကောင်းရင် ထားလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခု ဆက်ဖတ်တာပေါ့။ Admin Selection Board မှာ Copy တွေ ပွားလိုက်တာပေါ့။ လျှောက်လွှာ အစောင်တွေ အက်ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင် လေးငါး ယောက်လောက် အဲလို ၀ိုင်းဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ တချို့က ၀င်ခွင့်အက်ဆေးကို Professionally လာဖတ်တဲ့လူ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံပေးရ တယ်။ Professional လာဖတ်တဲ့လူတွေက Expert တွေ။ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်တုန်းက တွေ့ဖူးတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် မေးဖူးတယ်။ ဘယ်လိုရွေးလဲ။ သူကတော့ လုံးဝ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းကို ပြောတယ်။ သူက နာရီနဲ့ငှားတာ၊ နာရီ ဒီလောက်ဒီလောက်အတွင်း၊ ဒီလောက် ဒီလောက် ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး၊ ဥပမာ တစ်ပုဒ် ကို တစ်ရက်လုံးကြာအောင် ဖတ်လို့လည်း မရဘူး။ ကျောင်းအနေနဲ့က သူကိုလည်း အများ ကြီး ယုံကြည်ထားတာကိုး။ သူက ဒီအက်ဆေး ကောင်းတယ်၊ ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုရင် ကျောင်း က များသောအားဖြင့် သိပ်ပြီးတော့ ထပ်ကြည့် လေ့တော့ မရှိဘူး။ ဌာနကတော့ သူ့ဌာန ရောက်ရင် ဥပမာ ထားပါတော့ သွားနဲ့ပတ်သက် လို့ သွားဌာနရောက်မယ့်လူကို နည်းနည်းတော့ ကြည့်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် ကို တော်တော်များများက အလေးထားကြ တယ်။ ကဲ... အဲတော့ အက်ဆေးနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ သမီးတို့ကရော သမီးတို့လို လူငယ်မျိုး တွေကို ဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲ။
သူရ။ ။ အင်တာနက်မှာ သူများရေးထားတဲ့ အက်ဆေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ နောက် အင်တာနက်မှာ Techinque တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အက်ဆေးမှာ အမျိုးအစားက အများကြီး ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အက်ဆေးအားလုံးမှာ Persuasive က အရေးကြီးဆုံးပဲ။ နောက်ပြီးတော့ Idea ပိုင်းက Guide ပေးတဲ့ Encarta လိုမျိုး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ရှိတယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ ဒါဆို ကျွန်တော် နောက်တစ်ခု ထပ်မေးမယ်။ အက်ဆေးရေးတဲ့အခါ Personal အက်ဆေးပဲ ပြောကြပါစို့။ ဘယ်ကျောင်းမဆို အရင်ဆုံး Personal အက်ဆေးကတော့ ရေးရတာ ချည်းပဲ။ ကျန်တဲ့ ကျောင်းအလိုက် ကွဲသွားတဲ့ တခြား အက်ဆေးလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲတော့ Personal အက်ဆေးရေးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို စပြီးတော့တည်လဲ။ ဥပမာ My name is Thitsar. အဲလိုစပြီးတော့ ရေးလား၊ ဘယ်လို ရေးလဲ။
Jasmine ။ ။ ကိုယ့်ရဲTurnning Point တို့ ဘာတို့ ပြောနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကိုယ်က ရင့်ကျက်တာ ဖြစ်လာတယ် ပေါ့နော်။ အဲလိုပုံစံမျိုး။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက် တွေကို ကြွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထုတ်ဖော်တာပေါ့။
သူရိန်ငယ် ။ ။ မြန်မာအမျိုးသမီး Professor တစ်ယောက်။ သူ ပြောတဲ့ဟာ တစ်ခုက ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြမယ်။ သူ ပြောတာက ကိုယ်က အကြောင်းအရာတစ်ခု ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးစာပိုဒ်မှာ အဲဒီ အကြောင်းအရာကို နောက်လူ ဖတ်ချင်အောင်၊ ဆက်ဖတ်သွားချင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ပြီး ရေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲတော့ အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အက်ဆေး တော်တော်လုံးပမ်းရတယ်။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါက တစ်ခုပေါ့။ အခုနက ၀င်ခွင့်လျှောက်တဲ့ အခါ အက်ဆေးအပြင် Reject အလုပ်ခံရတဲ့ အချက်က ဘာလို့ထင်လဲ။
Jasmine ။ ။ ဒီနှစ်ကတော့ US ဘက်မှာ Bankruptcy တွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့ကျောင်းတွေက Financial Aid မပေးနိုင်ဘူး။ တချို့ ကျောင်းတွေဆိုရင် ခါတိုင်း သုံးယောက်လောက်ခေါ်တဲ့ ကျောင်းတွေ၊ အခု လုံးဝမခေါ်ဘူး။
သူရိန်ငယ် ။ ။ နောက်တစ်ခုက Financial Aid ခွဲတမ်းရှိတဲ့ အတန်း တစ်တန်း ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပေါ့နော်။ ဒီနှစ် Foreign Student ၃၀% ခေါ်မလား ၄၀% ခေါ်မလား ၅၀% ခေါ်မလား စသဖြင့်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း Foreign Student သည် အမြဲတမ်း ၄၀% ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါမျိုးရှိတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့Share က ၂၀% ၃၀% ရှိတယ်။ ကိုယ်လျှောက်တဲ့နှစ်ကျမှ အရမ်း Foreign Student တွေ လှိမ့် လျှောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် ရနိုင်ခြေက နည်းသွားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တာ ပေါ့နော်။ ကျောင်း Website တွေ ကြည့်တဲ့အခါမှာ အဲဒါတွေကော ကြည့်သေးလား။
Jasmine ။ ။ ကြည့်တယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ နောက် Postgraduate နဲ့ Undergraduate နဲ့ လိုင်းနဲ့တော့ ဆိုင်မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီလေး လျှောက်တဲ့ Subject မျိုးဆို Undergraduate က Scholarship များလား Postgraduate က Scholarship များလား။AKT ။ ။ Post က များမယ် ထင်တယ်။ Undergarduate က နည်းမယ်။ တချို့က သိပ်မပေးဘူး။ ဘွဲ့လွန်တွေလည်း မပေးဘူး။ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လိုင်းပေါ်မှာလည်း မူတည်သေးတယ်။ Medical ဘက်ဆိုရင်တော့ သိပ်မပေး ကြဘူး။
မသီတာ။ ။ Development Study တွေဆိုရင် ပေးတယ်။
သူရိန်ငယ်။။ အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် လူမှုရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေဆိုရင်တော့ Scholarship ပေးတာများတယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကျောင်းပြီးလို့ မန်နေဂျာလုပ်စားမယ့်သူတွေ၊ ကျောင်းပြီးလို့ ကိုယ့်ဆေးခန်း ကိုယ်ဖွင့် စားမယ့် လူမျိုးတွေကျတော့ အဲလိုဘာသာရပ်မျိုးတွေကျတော့ ပေးဖို့ Chance နည်း တာပေါ့။
မသီတာ။ ။ နောက်တစ်ခု ဟိုမှာ အထက်တန်းကျောင်းဘ၀ကို ၁၂ တန်း အထိ တက်ခဲ့တာကိုး။ ပညာရေးစနစ်ပုံစံ မတူတာလည်း ပါတယ်။ Grade ၁၂ အထိကျော်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုး ရှိတာပေါ့။ ဒီဘက်မှာကျတော့ သူငယ်တန်းကို အခုမှ Grade ၁ ပြောင်းထားတာပဲ ရှိတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ Grade ၁၀ ပဲရှိတယ်။ အဲတော့ အဲလိုမှာလဲ တို့ဘက်က နည်းနည်းလေး သူတို့ ပုံစံနဲ့ အဆင်သင့် ဖြစ်မနေတာပေါ့။ အမှန်တော့ တကယ့်တကယ်ကျတော့ ၁၀ တန်းပြီးလို့ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ Bechelor Degree အတွက်က အဆင်သင့်ဖြစ်မယ့် အနေအထားမျိုး ရှိမယ်ဆိုရင် အထူးတလည် ထပ်ပြီး ဒီတစ်နှစ်ကို အချိန်ထပ်ကုန်စရာ မလိုရဘူးလေ။ နောက် SATဆိုရင် အဓိကက ဘာမေးတာလဲ။သူရိန်ငယ်။ ။ Language ရယ် Maths ရယ်။
AKT ။ ။ နောက် Critical Thinking.
မသီတာ။ ။ တကယ်တမ်းကတော့ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးက ဘယ်လို ခေါ်မလဲ အထူးတလည် ဘာသာရပ် မဟုတ်ဘူးလေ။ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာ လည်း ကိုယ် သူငယ်တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရပ်ပဲ။ သင်္ချာဆိုတာလည်း သင်ခဲ့တာပဲ။ Critical Thinking ဆိုတာလည်း အမှန်က တော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ မသင်ရပေမယ့် သိလာခဲ့ရမှာလေ။ ဆိုတော့ အမှန်က ၁၀ တန်း ဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာကတည်းက ဒီ ၃ ခုက ထပ်ပြီး တော့ ကျူရှင် တက်စရာ မလိုလောက်အောင် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် SATအတွက် အချိန်က မရှိသင့်တော့ဘူး ပေါ့နော်။ အဲလိုဟာမျိုး တစ်ချက် စဉ်းစားမိ တာပါ။ အဲလိုတွေးမိလား။
Jasmine ။ ။SAT မှာ Subject Testတွေ ရှိသေးတယ်။ Maths , Maths, Physic, Chemistry, Bio ပေါ့နော်။သူရိန်ငယ် ။။ Medical သွားမယ့် လူတွေ SATမှာ ဘာ Subject တွေ ယူရလဲ။Jasmine ။ ။Subject က Bio, Chemistry.
AKT ။ ။ Maths , English က မယူမနေရ ယူရတာ။
မသီတာ။ ။ Maths တို့ English တို့ အနေနဲ့ကတော့နော် တကယ်တမ်း ၁၀ တန်းဖြေပြီးတာနဲ့ ဒီစာမေးပွဲကို ၀င်ဖြေနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတွက် အချိန်မပေးရဘူးပေါ့။
သူရ။ ။ နောက် အခုနက အစ်ကိုပြောသလိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အက်ဆေးရေး တဲ့အခါမှာ အရမ်းအခက်အခဲတွေ့တာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အက်ဆေး ဆိုတာကို အသေအချာ Idea ပိုင်းတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ Intro, Body, Conclusion ဒီလောက်ပဲ သိတာ။
AKT ။ ။ Idea က များများဖတ်ရင်တော့ ပိုရတာပေါ့နော်။
မသီတာ။ ။ တို့မေးတာက တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အခုက ကိုယ်ကတော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။ အခုမှ ၈ တန်းဖြေနေတဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်ကလည်း အဲလိုပဲ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သွားမယ်လို့ Target နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် ၈ တန်းလောက်မှာ ကတည်းက သူတို့ ပြင်ဆင်ဖို့ စဉ်းစားဖို့လိုပြီ။ အကြံဥာဏ်ပေး လို့ရတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ အဲလိုဆိုရင် ဘယ်လို အကြံ ဥာဏ်မျိုး ပေးချင်လဲ။ ဥပမာ အခုလောက် ၇ တန်း ၈ တန်းပဲပေါ့။ အခုလို ရည်ရွယ်ချက်မျိုး ရှိတယ်ပေါ့။ ၁၀ တန်းဖြေပြီးပြီးချင်းမှာ အချိန်ဟ မသွားချင်ဘူး။ အခုလောက် အချိန်တွေ မသုံးချင် ဘူး ဆိုရင်ပေါ့နော်။ ကြားထဲမှာ အဲဒီအရွယ်က တည်းက ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်တယ် ထင်လည်း ပေါ့။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရပေါ့။
AKT ။ ။ အဓိက Critical thinking ပဲ Thinking ပိုင်းကိုရမှ။သူရ။ ။ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ များများဖတ်ထားဖို့။မေသူ။ ။ English Magazine, English Series တွေ ဖတ်ဖို့။
AKT ။ ။ ဒါက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးရမယ်။
မသီတာ။ ။ အက်ဆေးကော။
AKT ။ ။ အက်ဆေးကတော့ ကျင့်ကို ကျင့် သင့်တယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက။ ကျောင်း လျှောက်ရုံနဲ့ မပြီးသွားဘူး ကျောင်းမှာလည်း ရေးရမှာပဲ။
မသီတာ။ ။ အခုဆိုရင်တော့ တို့ သိသလောက် က ၁၀ တန်းကို Target ထားပြီး ပြင်ဆင်ကြ တာ နည်းနည်းများတယ်လေ။ ဟုတ်တယ် မလား။ အဲဒီ ၁၀ တန်းကို ပြင်ဆင်တာတောင် ၉ တန်းရောက်မှ ပြင်ဆင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ တို့တော့ မသိတော့ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် အပြင်ကကြည့်တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်နေ တာကလေ။ ၉ တန်း ရောက်တော့မှ နောက် နှစ်ခါ ၁၀ တန်း အတွက်ဆိုပြီး အဲလိုစုပြီးတော့ သင်တဲ့နေရာမျိုးတွေ သွားထားမယ်။ အဲလိုမျိုး ပေါ့နော်။ ၁၀ တန်းလောက်အထိ Target ကို ထားပြီး ပြင်ဆင်တာလေ။ ၁၀ တန်း ဟိုဘက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြင်ဆင်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ၁၀ တန်းမှာ အမှတ်များများ ရအောင်ဆိုတဲ့ Step တစ်ခုပေါ့နော်။ Long Term Plan နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ပိုင်းပိုင်းပြီး ပြင်ဆင်နေသလိုပဲ။ ၈ တန်း ၉ တန်းလောက်အထိမှာ ကိုယ်ရထားတဲ့ အချက် အလက်နဲ့ ပြင်ဆင်တာက ၁၀ တန်းလောက်ကို အမြင့်ဆုံးနေရာနဲ့ချိန်ပြီး ပြင်ဆင်တာ။ ၁၀ တန်း အောင် သွားပြီးတော့ ရလာတဲ့ ရလဒ်ပေါ် မူတည်ပြီးတော့မှ ဟိုဘက်ကို သွားတဲ့အခါကျ တော့ အချိန်က တစ်ခါပြန်ဖြစ်နေတယ်လေ။
ဥပမာ ကိုယ်က အလယ်တန်းလောက်မှာက တည်းကိုက နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ရဲ့ စံတစ်ခုကို သိနိုင်လောက်တဲ့ English, Maths, Critical Thinking ကို အဲဒီတည်းက ပျိုးထောင်လာမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ပုံစံလည်း မတူတော့ ဘူးပေါ့နော်၊ အချိန်လည်း ကွာသွားပြီပေါ့။ ၇ တန်း ၈ တန်း ကတည်းက ဖတ်လာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ် လာတဲ့ သဘာ၊ အက်ဆေးရေးကျင့်လာတဲ့ သဘာမျိုးက အခု ၁၀ တန်းအောင်တော့မှ ပြန်ကျင့်ရတာမျိုးနဲ့တော့ မတူနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါလေးတစ်ချက် စိတ်ဝင်စားလို့။ အခု နောက်ပိုင်းက စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်ပေါ့နော်။ ကိုယ်အစ ကတည်းက Plan လည်း တစ်ခုခု ရှိနေပြီးသား။ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် အပြင်ထွက်ပြီး စာသင်မယ် ဆိုတဲ့ Plan က ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ တို့ထင် တယ် ၁၀ တန်းပြီးမှဆိုတဲ့ Target ထားတာက သိပ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်လို့၊ သဘောတူလား။သူရ ။ ။ ISY တို့၊ အဲဒီက ကလေး တွေဆိုရင် တော်တော်သာတယ်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်စာ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ထိတွေ့လာတာ။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်း လက်တွေ့တွေ လုပ်ရတယ်။ SAT အတွက် ကော SAT အတွက်ကော TOEFL ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ အက်ဆေးက သူတို့ အမြဲရေး ရတာဆိုတော့လေ။ သူတို့တွေကျတော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် တို့ဘာတို့ကျတော့ အရမ်းဈေးကြီးတော့ မိဘတွေက မထားနိုင် ကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အချိန်ထပ် ယူလိုက်ရတဲ့ သဘောပါ။ သူတို့က GCE လည်း ဖြေတယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ အခု US ကျောင်းတွေကို လျှောက်ကြတယ်။ US အပြင်က ကျောင်းကော လျှောက်လား။
မေသူ ။ ။ လျှောက်တယ် SMU ရယ် NUS ရယ်။
Jasmine ။ ။ ကျောင်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတစ်ခု ရှိတယ်။ သမီးက ကနေဒါက ကျောင်းတို့ ဂျပန်ကကျောင်းတို့ အဲလိုမျိုး စိတ် ၀င်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က 12 years Education တောင်းတယ်။
AKT ။ ။ ဂျပန်ကျောင်းတွေက အဲလိုပဲ။
မသီတာ။ ။Bechelor Degree က အခုအခှါအညေိမေိ က 12 years Education ဖြစ်နေတယ်။
Jasmine ။ ။ သူက ၁၀ တန်းအောင်ပြီးရင် တက္ကသိုလ်က နှစ်နှစ်လောက် သွားတက်ပြီးမှ တက်လို့ရတယ်။
AKT ။ ။ ကျွန်တော် တစ်ခါ ဂျပန်သံရုံးမှာ Seminar ပေးတာ သွားမေး တာ။ ၁၀ တန်းအောင်နဲ့ မရဘူးတဲ့။ ဒုတိယနှစ်အောင်ပြီးတော့မှ လာတက် တော့တဲ့ အဲလိုမျိုး ပြောတယ်။
သူရိန်ငယ်။ ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဘွဲ့လွန်သွားတဲ့အခါ ဒီမှာ ရိုးရိုးဘွဲ့တွေက ၃ နှစ်။ သူတို့က Undergraduate ကို ၄ နှစ် တောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ Hons. ရတဲ့လူမှ ရမယ်။ Hons. မရတဲ့လူ ဒုက္ခရောက်ရော၊ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး။
မသီတာ။ ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့။ အခုနက တို့ပြောတာလေ၊ ငယ်ငယ် လေးကတည်း ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့Target က ၁၀ တန်း ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ အချက်အလက်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မသိတော့ ၁၀ တန်းမှာပဲ လမ်းဆုံး ပြီးတော့ ဒီ Target နဲ့ပဲသွား၊ ပြီးတော့မှ တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ် လုပ်ကြ နေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Target ကြီးက ခလယ်မှာ တစ်ခါ တစ်ထောက် နားလိုက်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ အမှန်တော့ ဟိုးကတည်းက အရှိန်နဲ့ တက်လာရင် ဒီဟာတွေက အေးအေးဆေးဆေး ကျော်သွားလို့ရတယ်။ Information သာ သိခဲ့မယ်ရင် အခုနကလို ၁၂ နှစ်ပြည့်မှလို့ သိခဲ့ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို ကိုယ်က ၀င်ဖြစ်ရင်ဝင် ဖြစ်နေဦးမှာ။ ဒီကြားထဲ တစ်လျှောက်လုံး ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ရတယ်လေ။ အခု တစ်ထောက်နားသလို သွားသွားဖြစ်နေတာလေ။
Jasmine ။ ။ ဒါပေမယ့် သမီးတို့ ၁၀ တန်းတက်နေတုန်းက အဲလိုမျိုး SAT, TOEFLတို့ ဖြေပြီးထွက်တဲ့ဟာက Popular သိပ်မဖြစ်ဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ကျူရှင်တွေလည်း သိပ်မရှိသေးဘူး။ ၁၀ တန်းလောက် ရောက်တော့မှ ကိုယ်က Idea ရသွားတာ။
မသီတာ။ ။ အဓိက ပြဿနာက Information လုံလုံလောက်လောက် မရတဲ့ ပြဿနာ။
Jasmine ။ ။ နောက် Generation ကျတော့ ကောင်းသွားတာပေါ့။မသီတာ။ ။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ဒီစကားဝိုင်း လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါပါပဲ။ နောက် Generation ဆိုတာလေ အခု ဒီနှစ် ၁၀ တန်းအောင်သွားတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဒီစကားဝိုင်းက သိပ်ပြီးတော့ အသုံးတဲ့ချင်မှတဲ့မယ်။ အခု ၇ တန်း ၈ တန်းသမား အတွက်တော့ အသုံးတဲ့မယ်။ ဒီ Information ရသွားလို့ရှိရင်တော့ သူတို့အတွက် စဉ်းစားစရာ ရသွားပြီ။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆို လို့ရှိရင်တော့ ငါတို့ Target က ဒီ့ထက်အရှေ့ကို မှန်းရမယ်၊ ဘယ်လောက်ထိ ဖြတ်သန်းဖို့ ရှိသေးတယ် ဆိုတာသိပြီး သူ အရှိန်တင်သွားလို့ရတာပေါ့။
AKT ။ ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ၁၀ တန်းပြီးမှပဲ သိလို့လုပ်ဖြစ်တာတွေ များတယ်။ ကျူရှင်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တက်တုန်းက လူဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး။ အခုဆိုရင် အများကြီးပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာတာပေါ့နော်။သူရ။ ။ ၇ တန်း ၈ တန်းကတည်းကနေပြီး ကလေးလေးတွေကို ပြင်ဆင် ပေးသင့်တယ်။သူရိန်ငယ်။ ။ မိဘတွေကို Target ထားပြီး ပညာပေးသင့်တယ်။
မသီတာ။ ။ သူတို့ အခု ဘာသာရပ်ရွေးတာကော ကိုယ်ဝါသနာပါတာ လား။ မိဘရဲ့Input ရှိလား။
AKT ။ ။ Input တော့ မရှိဘူး။ ကိုယ်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ Future ကိုလည်း ကြည့်ရသေးတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်က ဘာသာရပ်တစ်ခု ယူလိုက်ပြီးတော့ အလုပ်တွေဘာတွေ ရှားရင်လည်း မဖြစ် သေးဘူးလေ။ အဓိကက ကိုယ်လည်း စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ၊ Future အတွက် လည်း ကောင်းတာနဲ့။သူရ။ ။ ကျွန်တော်က Dental တက်ချင်တယ်ဆိုတာကလည်း ဟိုမှာကDental က ပိုက်ဆံတော်တော်လေးရတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က စိတ်လည်း ၀င်စားတယ်။ ဒီမှာလည်း Dental တက်နေတယ်။ ပထမနှစ်ပြီးသွားပြီ။ နောက်ပြီးတော့ လူဆရာဝန် ကျတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီး ဈေးလည်းကြီးတယ်၊ မြင့်လဲမြင့်တယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ ၅၀% လောက်ပဲရှိတယ်။ အပြည့်အ၀တော့ မဟုတ်သေးဘူး။
Jasmine ။ ။ သမီးကကျတော့ Bio တက်နေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စား သွားတာပေါ့နော်။
မေသူ။ ။ အဓိကက သင်္ချာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဓာတုဗေဒတို့ဘာတို့ ကျတော့ မှတ်ရတာ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ တွက်ချက်အဖြေပေးရတာ ပို ကြိုက်တယ်။
သူရိန်ငယ် ။ ။ နောက် Generationပဲဆိုပါစို့။ ကိုယ်နဲ့ ဘ၀တူတွေကို ဘာများဖြည့်ဆည်းပေးချင်သေးလဲ။ သိသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ဟာပေါ့။
သူရ။ ။ ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံတကာ သံရုံးတွေက ဖွင့်ထားတဲ့ စာကြည့် တိုက်တွေကို ၀င်စေချင်တယ်။ ပြီးတော့ လှည်းတန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ Ice Youth မှာလည်း စာအုပ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ စာကြည့်တိုက်တွေက စာအုပ်တွေကို လေ့လာရင် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Jasmine ။ ။Website တွေ ညွှန်းချင်တာ ပေါ့နော်။ College Book တို့ Commonapp တို့ အဲလိုမျိုး Website တွေ။
မေသူ။ ။ ဒီမှာ ကျောင်းသားတွေ အများစုက မရဲကြဘူး။ အတန်းရှေ့ ထွက်ပြောရဲတာတို့ အဲဒါတွေ နည်းနည်း ရင်းနှီးအောင် လုပ်သင့် တယ်လို့ ထင်တယ်။
ဒီစကားဝိုင်းကနေ ဖူးငုံတို့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတွေကို လျှောက်တဲ့အခါ ကြိုတင်ပြင် ဆင်စရာ အချက်အလက်တွေ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောင်လည်း ဖူးငုံတို့ရဲ့ ပညာရေး အတွက် အကျိုးရှိမယ့်ဆောင်းပါး တွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
>>>2ယောက် မှတ်ချက်ပေးထားသည်
ရန်အောင် October 31, 2008 74.72.236.40 Votes: +0
သိပ်ကောင်းတဲ့ စကားဝိုင်းလေးပါပဲခင်ဗျာ. ဗဟုသုတအများကြီးရ ၊ တက်လမ်းရှာဖွေနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေအတွက်လည်း တစ်စုံတစ်ရာကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက် သလို ဖြစ်စေပါတယ်. သတင်းအချက်အလက်ရှားပါးတာကြောင့် ကျွန်တော့်တုန်းကလည်း အများကြီး နှောင့်နှေးခဲ့ရဖူးပါတယ်. အခုလိုသာ စုံစုံလင်လင်နဲ့ သိခွင့်ရခဲ့ရင် အချိန်တွေ အများကြီး save ဖြစ်သွားမှာ. ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးေ၏ပေး ကြသူအားလုံးနဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်ပေးသူတွေကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ဒီ ပို့စ်လေးကို ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ website လေးမှာ ပြန်လည်ဖော်ပြချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ. လေးစားခင်မင်လျက် ရန်အောင် www.yanaung.net
အယ်ဒီတာ November 03, 2008 72.195.135.48 Votes: +0
အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တဖန်ပြန်ဖော်ပြဖို့ ခွင့်တောင်းတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးတဲ့အခါ ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းက ရယူကြောင်းလေးတော့ ထည့်သွင်းပေးပါနော်။
DatE Sunday, March 22, 2009 LaveL Education0comments link this
အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတာ့ လုပ်စရာကိုမရှိလို့။ လုံးဝ လုပ်စရာမရှိတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ၂ နာရီလောက် လုပ်ရင်ပြီးတဲ့ အလုပ်ကို တစ်နေကုန် လုပ်နေရတာကို က ပျင်းစရာရာကြီးဗျာ။ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်က အလုပ်တွေနဲ့လုံးနေမှ ကိုဖြစ်မှာ။ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ကို နှစ်ထားခြင်တယ်။
မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းခေါ်ပါတယ်။ ဘာမှ လည်းမပြောရပဲ ပိုက်စံကို စားစားသွားတယ်။ ဒီလိုကြုံရတာလည်း ခဏခဏပဲ။ ဈေးကလည်း ကြီးလိုက်တာမှ ပြော မပြောခြင်ဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ပေါ့ဗျာ ဖုန်းကဒ်ဈေး နှုံးကတော့ ထိပ်ဆုံးကပဲ။ အိန္ဒိယတွေ။ ဘင်္ဂလားတွေ ကို ကြည့်ကြည့် သူတို့တွေ နိုင်ငံက မိသားစု နဲ့ ဆက်သွယ် ရေး တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်။ တို့များ ရွှေမြန်မာများမှာတော့......
အခန်းက အကိုကြီးတစ်ယောက် မြန်မာ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ တစ်ထုတ်ကြီး ငှားလာတာကို ထိုင်ကြည်
့ဖြစ်တယ်။ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့တာတွေက တခါလာလည်း စင်္ကပူ အလုပ်လုပ်သွားမယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်မယ် ။ ဒါတွေပဲထပ်နေတယ်။ မှတ်မိသေးတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက ဇာတ်ကားတွေ ကျောက်တူးသွားမယ်။ မိုင်းရှူး သွားမယ်။ ဖားကန့်သွားမယ်၊ မိုးကုတ်သွားမယ် အဲဒီလိုတွေလေ။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ကျောက်တွေ တူးစရာ မရှိတော့ဘူးလားမသိဘူး။ အေးလေ... ဘယ်အရာမှ မတည်မမြဲတာ.....
ဟုတ်တယ် တော်တော်ကို ကြာပီ။ အနှစ် ၂၀ နီးပါပဲ။ ကျနော် ခေါင်းကို အရိုက်ခတ်ဆုံးက လူသားတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး။ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ကျနော့်ခေါင်းကို ရိုက်ခတ်တာဗျာ.. စဉ်းစားသာကြည့်တော့..
ဦးသန့် က ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်ချုပ်ရသူပါ။ ကျနော်က ဘာလည်း - ကမ္ဘာကြီးကို အေးချမ်းစေခြင်သူပါ။ အထူးသဖြင့် ကျနော့် မိခင်တိုင်းပြည် မြန်မာပြည်ကို အေးချမ်းစေခြင်သူပေါ့......
DatE Friday, March 20, 2009 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
အူ တူတူ အ တတ (ဟာသ)
သဘောင်္ကျင်း အလုပ်သမား မောင်က သည် အလွန် ထူ သူ၊ အ သူ ဖြစ်သည်။
မောင်ခ သည် ခပ်နောက်နောက် လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
အလုပ်နားချိန်တွင် အစသန်သော မောင်ခ သည် မောင်ကအား စနောက် တော့သည်။
မောင်ခ ။ ဒီနေ့.. သဘောင်္ပေါ်မှာ ကံကောင်းလို့ မသေတာ။
မောင်က ။ ဟုတ်လား ဘာဖြစ်လို့လည်းကွ။
မောင်ခ ။ မင်းသိတဲ့ အတိုင်း အိန္ဒိယ ကုလားဖစ်တာကွာ ဦးနှောက်ကို မရှိဘူး။ သဘောင်္ထဲမှာကွာ (cuကတ်တာ ဖြတ်တာ ဘေးနံရံက သံပြား ပေါက်သွားတယ်ကွာ။
မောင်က။ ကုလားတွေက လုပ်ရင် ဒီတိုင်းကြီးပဲ .. ပင်လယ်ထဲက ရေတွေဝင်မလာဘူးလား။
မောင်ခ။ အေး အဲဒါပြောမလို့ .. ငါက ဘေးနားမှာရှိနေတာ လေကွာ။ ငါလည်း ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပေါက်သွားတဲ့ အပေါက်ကို ၀ါးပီးသား ပီကေနဲ့ ကပ်ပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။
မောင်က။ ဟင်.. ဟုတ်လား တော်သေးတာပေါ့... ပီကေ ၀ါးပီးသားအဆင်သင့်ရှိလို့ !!!
မောင်ခ ။ အေး.. အဲဒါကြောင့်ပြောတာ။ ငါသာ ပီကေ၀ါးပီးသား မပါရင် ပြသနာ တတ်ရုံတင်မကဘူး။
မောင်က ။ အေးကွာ ငါလည်း ပီကေဆောင်ထားဦးမှ။ အရေး အကြောင်းဆို သုံးလို့ရတာပေါ့။
(ဘေးနားမှ လူများ က ရုတ်တရက် မောင်ကအားကြည့်ကာ ရယ်ကြသည်။ အေး များများဝယ်ထား များများဝယ်ထား ဆိုမှ မောင်က ခမျာ သဘောပေါက်ရှာသည်)
DatE Tuesday, March 17, 2009 LaveL ဟာသ0comments link this
အဆောင်မှာ ဘောပွဲကြည့်လို့ ရဘူး။
၂၄ နာရီ အလင်းပေါက်ဆိုင်မှာ သွားကြည့်ရတာ။
မန်ယူ - အင်တာပွဲ နှစ်ပွဲလုံး ကြည့်ဖြစ်ပါသည်။
အဝေးကွင်း သရေ၊ အိမ်ကွင်း မှာ ၂=၀ နဲ့ မော်ရင်ညိုကို နှုတ်ပိတ်လိုက်ပါသည်။
ဆိုင်မှာ ဘောပွဲပရိတ်သတ် ၅၀ လောက်ရှိသည်။ မြန်မာ ၄၅ ယောက်ခန့်ရှိမည်ထင်သည်။
DatE Thursday, March 12, 2009 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
ရွာမှ သဘာဝ ဟင်းလျှာများ
ဒီဟင်းလျှာလေးတွေကတော့ ကျနော် ဘယ်တွေရောက်ရောက် တမ်းတ လွမ်းရသော အမေ့လက်ရာ စစ်စစ် အညာဟင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ရွာက ဟင်းလျှာတွေ၊ စားစရာတွေ နဲ့ပတ်သတ်လာရင် အနံ့လေးတွေက အစ မှတ်မိနေတယ်။ အခု ရေးပြတဲ့ ဟင်းလျှာများကို မကြားဖူး မမြင်ဖူးသူတွေ များမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၁။ မန်ကျီးရွက် နုနု ကို တောင်ပေါ်ပဲပြုတ် နဲ့ သုတ်တဲ့ အရသာကို လွမ်းတယ်။
၂။ မန်ကျီးရွက် နဲ့ ခရမ်းခေါင်းသီး ချဉ်ဟင်းကို မမေ့နိုင်ဘူး။
၃။ မိုးဦးကျ ထွက်တဲ့ ဆူးပုတ် နုနု နဲ့ ဆန်မုန့် ဟင်းချို ကိုလည်းလွမ်းတယ်။
၄။ မလွှပွင်၊ ကြောင်ရှာပွင့် ၊ ကြောင်ရှာသီး သုတ်စားခြင်တယ် ။
၅။ ဂုဏ် ရွက်နုနု နဲ့ ဆန်မုန့် ဟင်းချို လည်း စားခြင်တယ်။
၆။ သဘာဝ ခွေးတောက်ရွက် ဟင်းချိုချို။
၇။ မိုးဦးကျ ဟင်းနုနွယ်ရွက် ဟင်းချိုချို။
၈။ နွေမိုးဆောင်း လယ် ကန်စွန်းရွက်ကြော်။
၉။ ကိုင်း ချဉ်ပေါင် နဲ့ ဆူးပန်း၊ နံနံ ချဉ်ဟင်း တစ်ခွက်။
၁၀။ ပဲတိုင်ထောင် နဲ့ချဉ်ပေါင်ရွက် ဟင်းရည်ချို။
၁၁။ လက်ပန်ပွင့်ခြောက် (၀က်သားနဲ့မလဲနိုင်ပါ) ဟင်းစားခြင်တယ်။
၁၂။ ငရှာရွက် ဆန်မုန့် ဟင်းချိုကိုလည်း လွမ်းပါ့။
၁၃။ ကြက်ဟင်းခါးရွက် ကြော်ကိုလည်း လွမ်းတယ်။
၁၄။ ခရမ်းခေါင်းသီး မီးဖုတ်သုတ်ကို မေ့နိုင်ဘူး။
၁၅။ ကဆစ်သီး မီးဖုတ် နဲ့ ငရုပ်သီးထောင်းကို စားခြင်တယ်။
၁၇။ ပေါက်ပန်းဖြူ ၊ ပေါက်ပန်းနီ ပွင့် ဟင်းချို။
၁၉။ အိမ်ထွက် ပုန်းရေကြီး သုတ် စားခြင်တယ်။
၂၀။ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် ကလအော် ငါရုပ်သီး နဲ့ချက်။
၂၁။ ထန်းရေမှ ရသည့် ထန်းပုန်းရည်ကြီး ချက် ။
၂၂။ ဆောင်းဦးပေါက် နံနက်စောစော မီးပုံဘေးမှာ ကောင်းညှင်းပေါင်းစား ခြင်သေးတယ်။
၂၃။ မြေပဲကြော်ကိုထောင်း ထမင်းပူပူ နဲ့ နယ်၊ နှမ်းမှုန့်ဖြူး ပြီးစားခြင်တယ် (မူပိုင်ဟင်းလျှာ)။
၂၄။ ဖားကင်၊ ထန်း ပင်ကျရည်။
၂၅။ လယ်ကြွက်ကင်၊ ထန်း ပင်ကျရည်။
၂၆။ ဆူးပုတ်ကြီးရွက် နဲ့ ပဲကြီးဟင်းချို လဲ စားခြင်တယ်။
(ဟင်းအားလုံးကို ချက်ပြုတ်ရာတွင် ဆုံကြိတ် နှမ်းဆီ ကိုသာသုံးပြီ မြေအိုးနှင့်ချက်သည်)။
DatE Monday, March 09, 2009 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
အဲဒါကို စာဖွဲခြင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လိုခြင်တာ။ ပြန်လိုခြင်တာ၊ ပြန်ရခြင်တာပါ။
ကလေးငယ်လို ဖြူစင်တဲ့ သဘာဝ ရိုးသားမှု ကိုပေါ့။
ကျနော့်ဆီမှာ အဲဒီ ”သဘာဝ ရိုးသားမှု” ပြောက်ဆုံးနေတာ ကြာပီ။
အသက်ကြီးတာနဲ့ အမျှ မျက်နှာက အရေထူးလာတယ်။
အကြောင်းကြီးငယ်ကြောင့် မျက်နှာပူခြင်းကို တခါတရံ လုံးဝ မမှုတော့ဘူး။
အရေ ထူးတဲ့ မျက်နှာကြီးကို တော်တော်မုန်းတယ်။
ဟုတ်တယ် ကလေးဘ၀ မျက်လုံးတွေက အမှန်တရား စကားကိုပြောတယ်။
ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတယ်။ ဖြူစင်ရိုးသားမှုရဲ့ သင်္ကေတပဲ။ ခု အဲဒီမျက်လုံးတွေ ဘယ်မှာလည်း။
ငါ ပြန်ရခြင်တယ် သဘာဝ ရိုးသားမှု။
DatE Monday, March 09, 2009 LaveL personal0comments link this
ဒါပေမယ့် လေ ဘာဖြစ်လည်း - ရေးလိုက်ပီ။
တခါတခါ ကျနော် သင်္ချာ နဲ့ကျောင်းပြီး ပါတယ်။ သချာင်္ဘွဲ့ ရပါတယ်လို့ ပြောရမှာ ရှက်သဗျာ။
ကိုယ် ဘယ်လောက်လေ့လာခဲ့သလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိ။ နည်းနည်းပါးပါး သိတာလေးတွေကျတော့
ကျောင်းမှာကျန်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ (ရွာ) နေစဉ်တုန်းက ဒီဖော်မြူလာတွေ ဘာလုပ်ဖို့ ဒီလောက် ကျက်နေရတာလည်း။ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်မပြပဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တတ်မှာလည်း - အဲဒီလို မေးခွန်းများနဲ့ပဲ မှတ်သင့်တာ မမှတ်ခဲ့။ ယူနီဘာစီးတီးမှာ ပိုက်စံလည်း မရ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ လိုက်ပီး ကျောင်းပြီးခဲ့တယ်။ (အချော အလှ အလကားတင်ပါတယ် ၊ အအေးတောင် တိုက်သေးတယ် .. အဟီး..)
ခုလို အလုပ်ထဲရောက်တော့ မှ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ပက်လက်လန်တော့တာပဲ။ အလုပ်လုပ်နေရင် တစ်စ နှစ်စ ဖော်မြူလာလေးတွေ မြင်ရောင်လာပေမယ့် အတိအကျ မသိဘူး။ ဒွတ်ခ နဲ့ လှလှနဲ့ တွေ့တော့တာပဲ။ ဖော်မြူလာတွေ မသိတော့ ဘာဖြစ်လည်း အချိန်မကုန်သင့်တာ ကုန်တယ်။ ငယ်ငယ်က မြန်မာနိုင်ငံပုံ မဆွဲတတ်ခင်ကပေါ့။ စက္ကူကို ရေနံဆီမီးခိုး မှိုင်းခံပြီး သင်ရိုးစာအုပ်ထဲကပုံမှာ ခဲတံနဲ့ ပုံတူကူးသလိုပဲ လုပ်နေရတယ်။ ဒီလိုလေ.. တန်းပလိတ် လုပ်ပီး နမူနာမှတ်ပီး လုပ်ရတာပေါ့။ ငယ်ငယ်က ပုံတူကူးတဲ့ အကျင့်က ခုထိပါလာတာထင်တယ်။
နောင်လာ နောင်သားများ အား ပြောခြင်သပ။ သင်္ချာ အခြေခံ လေးတွေ ၊ ရူပဗေဒ အခြေခံ ဖော်မြူလာ လေးတွေ ကျောင်းမှာ မထားခဲ့ကြနဲ့လို့ပေါ့။ ထောင့်မှန် နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပုံသေနည်းများ။ ပိုက်သာဂိုရပ် သီအိုရမ်များ တကယ်အသုံးဝင်တယ်ဗျာ။ ကျောင်းက သင်သမျှ လုံးတာ၊ ၀ိုင်းတာတွေ၊ သုံးထောင့် လေးထောင့် ငါးထောင့် အကုန်လုံး သေချာ မှတ်သားထား ဖြစ်နိုင်ရင် အလွတ်ကျက်။ စက်ဝိုင်း နဲ့ပတ်သတ်တာ ၊ တြိဂံ နဲ့ပတ်သက်တာတွေ မမေ့သင့်ဘူး။
ကျနော်များတော့ အသုံးလိုခါမှ သတိရ ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့၊ ဘာပဲလိုလို အင်တာနက်မှာရှာဆိုသလို ဖြစ်နေပါပီ။ အဲဂလို ရှာရင်းနဲ့ easycalculation.com ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေး တွေ့ပါတယ်။ သင်္ချာနဲ ပတ်သတ်တာ လေးတွေ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျောင်းပြန်ရောက်နေသလိုပဲ။ Right Angled Triangle Calculation မှာ Opposite Side , Hypotenuse Side , Adjacent Side အတွက် ပုံသေနည်း အပြင် calculator ပါသုံးလို့ရတာ တွေ့ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆို အမြန်ဆုံးသာ ကလစ်လိုက်ပါ။
မနေ့ညက မြန်မာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တကားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပြောခြင်တာက ကျောင်းဆရာမ အခန်းမှာ ဆရာမက မြန်မာစာရေးတာ မရေးတတ်ဘူးဗျာ။ (၀) ၀လုံး မ၀ိုင်းတတ်ဘူးဗျာ။ တော်တော်လေး ဆိုးပါတယ်။ နောက်ပီး င သတ် (င်) လည်း မရေးတတ်ဘူး၊ သူငယ်တန်း မနေခဲ့ရဖူးထင်တယ်။
..... အင်း...ဒွတ်ခ.. ဒွတ်ခ.......
DatE Sunday, March 08, 2009 LaveL personal0comments link this
ဂျီမေး မှ ဘလော့ သို့ အစမ်းတင် ကြည့်ခြင်း
ဒီနည်း ကို သိနေပေမယ့် မစမ်းဖြစ်ဘူး။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း ဆိုတာတောင် မလေ့လာဖြစ်ဘူး။
ရွာပြန်ရောက်ရင် အသုံးကျမယ့် နည်းလေး ဆိုတော့ တောင်ပေါ်သားလေး မေးပီး
စမ်းကြည့်တယ်။ ရ၏ မရ၏ တော့ ကြည့်ရမှာပဲ။
DatE Saturday, March 07, 2009 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this